10 sano ka hor, markii set ugu horeysay ee ciyaartoy Blu-ray ka dhacay khaanadaha suuqa, waxay ahaayeen arrin weyn oo aan si wacan u ciyaaraya. Waa hagaag, size ma ahayn arrin walaac xiligaa in uu yahay helitaanka content HD on your TV ahaa laftiisa in wax weyn.
Si kastaba ha ahaatee, maalmaha kuwa haatan sii marayaan. Ciyaartoyda Blu-ray maanta ma aha oo keliya ku saabsan HD dambe, ay maalmahan soo baakadda ah super caato la jeer loading lambar hal iyo qaababka sida 2D in 3D diinta, loo maqli 3D Blu-ray, barnaamijyadooda, iyo Ultra HD 4K qaraarada.
Maanta, waxaan ku baran doonnaa eegno qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican Blu-ray 2015 iyo qaababka in ay la yimaadaan. Waxaan rajaynaynaa in liiskan ayaa kaa caawin doona in aad ka dib markii ciyaaryahanka Blu-ray si fudud.
Loo maqli 3D
Netflix iyo BBC iPlayer
2D iyo 3D images
Loo maqli MKV
Loading disc Quick
Price: £ 68,99
"3D iyo rafcaanka muuqaal cajiib ah, laakiin la'aanta WiFi iyo xulashada saboolka ah ee Chine, ka-DMP BDT160 ma aha smart u cusboonaynta ee ay noqon doonto. Best arkaa tayo weyn hagaajinta Blu-ray qol labaad."
3D Good iyo sanamyadii 2D
Loading disc 4-labaad
"The Panasonic DMP-BDT260 sharraxaa Blu-ray waa dhan oo ku saabsan qiimaha lacag. Dhisay-in WiFi waa anfacaya, sida waa Netflix."
2 USB naadi
2D in ay diinta ka 3D
Si heer qaadidda 4K
Price: £ 139,99 a
"Kuwa ka dib markii qaar ka mid ah barnaamijyadooda gaar ah, WiFi, iyo labada 2D 3D Blu-ray iyo, ka heli doontaa-DMP BDT360 fudud ah si ay u xakameeyaan iyo mashiinka cajiib ah."
Booska Card SD
"Korayaa oo dhan muuqaalada Blu-ray ugu dambeeyey, laakiin ay madal Viera Connect maqan a daadiyo muhiim u yar, ka-DMP BDT460 waa-dhamaadka sare doorashada qiimo wanaagsan."
Great images Blu-ray
Waafaqsan file Digital
"The BDP-S1200 ee u fiican images Blu-ray oo loo maqli file digital badan USB labada caddayn."
2D iyo 3D Blu-ray
Chine geeyo Key
Loo maqli USB
"Saaray ku dhawaad ​​dhammaan joogsato la WiFi super, mirroring screen oo badan oo Chine."
Laba naadi USB
"A qaab qiimaha weyn leh sawirada pin-fiiqan iyo 4Kupscaling."
"The DMP-BDT460 qiimaha fiican, doorashada-dhamaadka sare, lifaaqan ah HD TV Ultra, ka-DMP BDT460 tufo sanayd ee upscaled images Blu-ray iyo pin-fiiqan photos 4K."
Tayada 2D & 3D images Blu-ray
Taageero file Digital
"The BDP-S6200 ayaa hufan, smart barnaamijyadooda TV xirmo, taageero file digital fiican, iyo tayada bedelno labada 2D iyo 3D Blu-ray loo maqli disc."
Tayada sawirka Wanaagsan
Nidaamka qalliinka miidda
Badanleh smart doorashada TV
"Goyn karo oo xiiso leh. Samsung qaadataa smart si heer cusub."
Interface user Wanaagsan
Streaming barnaamijyadooda video
Images Blu-ray Good
"Ciyaaryahanka 3D Blu-ray Multi-tayo leh processing muhiimka ah, waxa uuna ku 4Kupscaling."
Interface user qeexida
"A ciyaaryahan Blu-ray hufan kuwa raadinaya in ay ka fogaadaan adeegyada Times bil walba."
Taageero file USB
Midabka Good & duwan
"Wax macno ah ma leeyihiin barnaamijyadooda ama shabakadaha, fogfog waa miskiin ah oo aan ka ciyaari kara 3D cajalladaha Blu-ray, weli waxaa hadhay wax ku saabsan BDX1500 ah, oo aan ka ahayn in ay qiimo yar yahay, in aan jeclahay."
Design soo jiidasho leh
Sawirada tayada sare
Nidaamka menu New
3D Blu-ray loo maqli karo
"The DMP-BDT270 waa ciyaaryahan Blu-ray likeable, keeni aad muuqaalada u Qurxiyey sida 4K qaadidda, Miracast, geeyo DLNA iyo barnaamijyadooda internet qiimo ah la awoodi karo. Waxa ay u muuqataa wax fiican, nidaamka menu waa fududahay in la isticmaalo iyo tayada sawirka ay waa cajiib ah. "
Blu-ray 3D Radidiyaha
Video Signal D / A Converter 148.5MHz / 12-bit
Wax soo saarka Support Video darka
Audio Tayada Sare
"Waxa ay ka maqan content web ballaaran iyo pizzazz ciyaartoyda miisaaniyadda horjeeda, laakiin-BDP 170 waa spinner ah solidly-dhisay disc la taageero qaab ballaaran oo ka shaqeynayaan waxtar leh wireless."
Isku xirnaanta Internet
Qiyaastii 30 qaabab file taageeray
"Waxa ay taageertaa qadar badan oo ah qaabab video sida MP4, 3gp, MKV, AVI iyo MP3 iwm, siinaysaa wax soo saarka oo tayo fiican leh, oo caadi ahaan loo isticmaalo guryaha ay sabab u tahay qiimaha yar yahay."
Geeyo DLNA & screen mirroring
Sharp, punchy sawirada Blu-ray
"Samsung mar walba oo soo bandhigtay wax soo saarka oo tayo fiican leh. Waxaa sidoo kale waa wax soo saarka aad u tayo sare leh qaababka cusub oo dhalaalaya iyo sidoo kale taageero barnaamijyadooda Samsung."
Geeyo file DLNA
Loo maqli audio Support
Sawiro tayo sare leh oo ay taageerayaan
Nidaamka qalliinka Fast
"The BDP-S4100 sameeyaa wax kasta oo aad ka filaneysaa ciyaaryahan Blu-ray ah, outputting HD qaabab audio ee bitstream ama PCM, qaadidda DVD in 1080p iyo diinta 2D in 3D on TV ka socon kara."
2D Blu-ray loo maqli karo
Taageer Sony Network
"Tilmaamaha yar yihiin, laakiin Sony BDP-S1100 waa hoosaadka ciyaaryahan cajiib ah £ 100 haddii kale - waa horyalka Talyaaniga, fududahay in la isticmaalo iyo koriyo sawirada HD Begovic."
22. LG in mawqif 740
Miracast iyo file DLNA geeyo
Sawiro cajiib ah oo qaab DLNA Begovic
Howlgal Remote sixir
Design soo jiidasho iyo nidaamka menu
"BP740 waa sagxad ah Blu-ray wanaagsan oo nidaam hawlgalka fantastic iyo web content gaar ah, laakiin ma aanu hubin waxa aanu ku filan si ay ugu qiil qiimaha."
Control la daadiyo Android
Nidaamka menu Bright
"The BDP-S790 waa ciyaaryahan hadda Sony ee top-of-the-duwan Blu-ray (ilaa-BDP S5100 soo saarey bisha soo socota, in uu yahay) iyo sida uu sarreysa oo dhan ka mid ah qaababka ugu horumarsan Sony iyo tricks. Kuwaas waxaa ka mid dhisay-in WiFi, helitaanka Sony ee Entertainment Network iyo, markii ugu horeysay ciyaaryahan Blu-ray ah, qaadidda 4K. "
DLNA geeyo warbaahinta
Saarka Dual HDMI
Loading cajalid Quick
"The Pioneer BDP-450 ma ahan ciyaaryahan Blu-ray raqiis ah, laakiin waxa aanu kaliya ku filan si ay ugu qiil tag qiimaha ay. Waxaa xooggan dhisay, qurux badan in ay eegaan oo ku reebaan sawirro-qeexidda sare sixir labada 2D iyo cajalladaha 3D. "
3D loo maqli Blu-ray isagoo diinta 2D
Network Entertainment ee Sony
Laba USB isla markii ay taageerayaan
Geeyo DLNA miidda
Content internet fiican
"The BDP-S490 waa ciyaaryahan aad u cajiib ah Blu-ray heli karo qiimo weyn, waxa uu helo wax kasta oo xaq - content internet fiican, dhibaatana-free geeyo DLNA, socketry deeqsi ah, design ah oo qabatay iyo entrancing sawirada Blu-ray in 2D iyo 3D . "
Chine Internet taageeray
Latest iyo nidaamka menu super
"Doorashada A deeqsi ah barnaamijyadooda, hagaajin nidaamka menu iyo sawiro indhaha shaac baxay ka dhigi-BDP S5500 mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee miisaaniyadda Blu-ray on suuqa."
Laba HDMI 2.0 dekedaha
Chine internet badan oo ay taageerayaan
Codka tayo wanaagsan
"Panasonic diirada taageerayaasha shineemo guriga qoon gaystay la mahadsanidiin-shahaado sagxad ah Blu-ray fiican in dhigeysa xoogga tayada dhismaha iyo waxqabadka, halka tuuraya in badan oo ka mid ah muuqaalada jarida-ku laayeen."
DVD, loo maqli CD
App BBC taageeray
"Calan-up waa dareen leh oo fudud, waayo, yar iyo jawiga ... ku dhow yahay inuu furaysto n ciyaaro!"
2D wajiyo iyo sawiro 3D
"Tayada sawirka Super u buluug iyo qaadidda."
Design A taasoo si fudud u dhaco isha
"The BD-J5900 waa Blu-ray ciyaaryahan miisaaniyadda oo taageera WiFi iyo sidoo kale app Opera TV taas oo ka dhigaysa Author fudud. Design sidoo kale waa mid aad u wanaagsan oo ay indhuhu."
DVD iyo CD loo maqli karo
4K videos taageeray
Taageerada iPad app fog
Tayada dhismaha Sedaxaad & design soo jiidasho
"UDP411 waa ciyaaryahan Blu-ray-dhamaadka sare ka mid ka mid ah noocyada hi-fi Socrates Britain ayaa Waxa uu isticmaalaa ka kooban yahay fasalka sare iyo tayada dhismaha raaxo leh si loo bixiyo video iyo music waxqabadka ugu fiican -. Xaqiiqo dhab ah oo ka muuqataa sicirka culus tag. "
32. Cambridge Audio Casuur 752BD
CD iyo DVD loo maqli karo, SACD
Network geeyo warbaahinta
Laba saarka HDMI iyo laba gashiga
Taageero qaab file Comprehensive
"Waan ka xumahay haddii aan burqan, balse waan ku guuldareysanay jacayl la Casuur Cambridge Audio ku 752BD si wayn. Haa waa super qaali ah oo lagu sharraxaa Blu-ray, laakiin waxaan ballanqaadayaa, in qof kasta oo ku raadsadaan £ 800 for this wiil xun ma ay ceeboobi doonaan. "
> Resource > Top List > ciyaaryahan Top 30 Blu-ray 2015